Zvimiro, Zvishandiso uye Zvakanakira Hydroponics | Green Renewables
Kune dzimwe nzira dzekurima nadzo mbeu kunze kwevhu rekurima, mapindu, nehari. Icho chiri nezve hydroponic zvirimwa.
1 Chii chinonzi hydroponics?
2 Hydroponics Zvimiro
3 Hydroponics inoshandisa
4 Kupatsanura uye zvakanakira zvinopihwa nehydroponics
5 Kushandiswa kwemidziyo
Chii chinonzi hydroponics?
Hydroponics inzira inosanganisira yekushandisa mhinduro dzekumesa zvirimwa pane kushandisa ivhu. Kune nzira dzakawanda dzekushandisa nzira iyi uye inobatsira kwazvo. Iwe unoda kuziva zvese nezve hydroponics?
Kana isu tikashandisa nzira iyi kudyara, midzi inogamuchira mhinduro yakafuma mune zvinovaka muviri zvinodiwa kuti ikure uye nezveyero yakaenzana yakanyungudutswa mumvura. Uye zvakare, iyi mhinduro ine zvese zvakakosha zvemakemikari ekuvandudza kwakanaka kwemuti. Saka, chirimwa chinogona kukura mune chicherwa mhinduro chete, kana mune inert svikiro, senge mavhu, pearlite kana jecha.
Unyanzvi uhu hwakawanikwa muzana ramakore rechiXNUMX masayendisiti paakaona kuti zvicherwa zvakakosha zvinofinhwa nezvirimwa kuburikidza nemaon inorganic akanyungudika mumvura. Mumamiriro ezvinhu echisikigo, ivhu rinoshanda sedura remaminerari zvinovaka muviri, asi ivhu pacharo harina kukosha kuti chirimwa chikure. Kana zvicherwa zvemuvhu zviri muvhu zvanyungudika mumvura, midzi yemuti inokwanisa kuatora.
Nekuti zvirimwa zvinokwanisa kuisa zvinovaka muviri mumhinduro, substrate haidiwe kuti muti ukure nekukura. Anenge chero chirimwa chinogona kurimwa uchishandisa hydroponic maitiro, kunyangwe paine zvimwe zviri nyore uye zviri nani mhedzisiro kupfuura zvimwe.
Nhasi, chiitiko ichi chiri kusvika mukukura kukuru munyika umo mamiriro ekurima akashata. Nokubatanidza hydroponics neyakafanira greenhouse manejimendi, goho rakakwirira zvakanyanya kupfuura iro rinowanikwa mune yakavhurika zvirimwa.
Nenzira iyi, tinogona kuita kuti miriwo ikure nekukurumidza uye nekuvapa chikafu chakapfuma mune zvinovaka muviri. Iyo hydroponics maitiro yakapusa, yakachena uye isingadhuri, saka zvekurima zvidiki, ichi chinhu chinokwezva kwazvo.
Yakatokwanisa kutengeswa uye kuti zvimwe zvekudya, zvishongedzo uye zvirimwa zvidiki zvefodya zvinorimwa nenzira iyi nekuda kwezvikonzero zvakasiyana zvine chekuita nekushaikwa kwevhu rakakwana.
Nhasi uno kune nzvimbo dzakawanda dzine ivhu rakasvibiswa nekudeuka kana tupukanana tunokonzera zvirwere zvezvirimwa kana kushandisa mvura yepasi inoshoresa ivhu. Saka, hydroponic kurima mhinduro kumatambudziko enzvimbo yakasviba.
Kana tisingashandise ivhu senzvimbo yekukura, hatina simba rekubaya rinopihwa nevhu rekurima. Nekudaro, vane matambudziko akasiyana siyana neoksijeni yemidzi uye hachisi chinhu chinganzi chakachena pachiyero chekutengesa.
Kune vanhu vazhinji vanoshandisa hydroponics. Vanhu vane nguva yemahara vanoda kuvaraidza nekutsvagisa, kwekutsvaga, kwekuratidzira kuvadzidzi nezve kukosha kwezvimwe zvinhu zvemakemikari, kunyangwe kune avo vanoda kukura mumudziyo kana mutabhu diki, kuti vakure muzvipenga kana muhombe kurima.
Kupatsanura uye zvakanakira zvinopihwa nehydroponics
Mbeu dzeHydroponic dzichangobva kushanduka dzakapihwa nzira dzaanoshandiswa uye kukanganisa kwezvakatipoteredza kwaanokonzera. Kune rumwe rutivi, tinowana mafomu kuvhura, ayo ndeaya anorasa marara, uye kune rimwe divi, tinaro iwo akavharwa, iyo inoshandisazve mhinduro yezvinovaka muviri senzira yekuchengetedza zvakatipoteredza uye hupfumi hwakawanda mukushandisa kwayo.
Hydroponics inodzivirira zvipingamupinyi uyeganhurirwa zvinounzwa nevhu rekurima ivhu. Ivhu rekurima rinoda iyo substrate, yakasimba zvinhu, mishonga yesora, mafetiraiza, mishonga yekuuraya zvipuka, nezvimwe.
Hydroponics inogona kuve neinert substrate kana ichidikanwa, senge perlite, pumice, peat, mavhu, Etc.
Hydroponic masisitimu aimbove erudzi "rwakavhurika", nekuti kukanganisika kwezvakatipoteredza zvekubuda kwemarara zvinoshandiswa pakurima hazvina kutarisirwa. Pavakangoona kukanganisa kwekurasa mhinduro pane zvakatipoteredza, nzira 'dzakavharwa' dzakagadzirwa. Iyi nzira yakavakirwa pakushandiswazve kwehutano kune zvimwe zvirimwa, kudzivirira kuunza zvinokanganisa nharaunda.
Hydroponics inopa akawanda mabhenefiti pane zvakajairwa zvirimwa:
Iyo inobvumidza kukura mukati meimba (balconi, materu, patios, nezvimwewo)
Inoda nzvimbo shoma (kumisidzana kunoiswa kunogona kuitwa kuti uwedzere kuwedzera nzvimbo)
Nguva yekurima ipfupi pane yekurima kwechinyakare, nekuti midzi iri kusangana chaiko nemanyowa, ichiwana kukura kunoshamisa kwemadzinde, mashizha nemichero.
Zvinoda vashoma vashandirwi, sezvo zvisiri zvakafanira kushanda ivhu (bvisa ivhu, ita michero, kuchenesa zvirimwa, nezvimwe.)
Iko hakuna dambudziko rekukurwa kwevhu, sekuzvirimwa zvechivanhu
Izvo hazvidiwe kuisa fetiraiza, saka miriwo inogadzirwa ndeye 100% organic.
Ichokwadi che haidi fetireza iyo mukana wakakura maererano nemamiriro ekunze. Sezvatinoziva, kunyanya kushandisa nitrogen fetiraiza ndicho chimwe chezvikonzero zvikuru zve eutrophication yemvura uye kusvibiswa kwemvura yepasi. Nekudzivirira kushandiswa kwefetiraiza tinenge tichideredza zvinokanganisa nharaunda.
Munguva pfupi yapfuura, kushandiswa kwemidziyo mune hydroponics masisitimu kwakataurwa. Pamwe pamwe ne "exponentially yakakwirira" goho, kushandiswa kwemidziyo mu hydroponics kunoona kuti ese masisitimu ari kukura zvakare vanozoshandisa 90% mvura shoma pane inoshandiswa mune zvekurima zvakajairika.
Kana hydroponics ichishandiswa mumidziyo, zvakafanira kuona kuti mvura inopfuura nepanzvimbo imwechete maminetsi gumi nemaviri. Nenzira iyi tichave tichishandura zvirimwa kuva purazi rinotakurika.
Kana isu tichiita kuverenga, tichishandisa hydroponics, inogona kukohwewa dzinenge zviuru zvina kusvika kumazana matanhatu ezviuru zvemiriwo (zvinoenzana nemakumi mashanu ematani pagore), inoenzana nekamakumi masere nhamba yezvikamu zvinowanikwa munzvimbo imwechete vachishandisa nzira dzekudyara nekukohwa zvakajairika mune zvekurima.
Sezvauri kuona, hydroponics inzira iri kuramba ichipararira, nekuti haidi ivhu rekurima uye inovandudza zviwanikwa nenzvimbo. Kana isu tichiwedzera hydroponics, isu tinopa zororo kune zvekurima ivhu zviri pasi pekumanikidzwa kwakanyanya kubva kune yakawandisa mafetiraiza, magejo, mishonga yesora uye mamwe makemikari anoshandiswa, uku zvichipa kudzikisira kusvibiswa.
Hydroponic zvirimwa, ndezvipi uye maitiro ekugadzira imwe pamba
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Hydroponics
Ndingafarire kuziva kuti mhando dzipi dzefuturu dzinotakurwa nemiti uye kwadzinotengwa.
Ndekupi kwaunogona kutenga iyo square pvc machubhu ekugona kutanga kana kurapa muhydroponics yekushandisa kwemhuri muArgenrin?
Iyo nyowani yeshanduko yesimba kuburikidza neBig Data